အာဖဂန်က ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးအမေရိကန်စစ်သားက ဘယ်သူလဲ?
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ အာဖဂန်စစ်ပွဲကတော့ အမေရိကန်တပ်တွေ ဒီနေ့မှာ အပြီးသတ်ထွက်ခွာမှုနဲ့အတူ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်တပ်သားတွေဟာ တနင်္လာနေ့ညက ကဘူးလ်လေဆိပ်ကနေ အပြီးသတ်ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး အောင်မြင်မှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ အာဖဂန်ဇာတ်လမ်းကို တခန်းရပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း အာဖဂန်ကထွက်ခွာခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးသောအမေရိကန်သားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်စေမယ့် ဗိုလ်မှူးချုပ် Chris Donahue ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ၈၂ လေတပ်ဌာနခွဲရဲ့ တပ်မှူး Chris Donahue ဟာ အာဖဂန်မြေကနေ နောက်ဆုံးထွက်ခွာတဲ့ အမေရိကန်စစ်သားဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ဒီဓာတ်ပုံကတော့ သမိုင်းဝင်နေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ညကြည့်မှန်ပြောင်းကို အသုံးပြုပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဖြစ်ကာ ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေထက်မှာတော့ ဒီဓာတ်ပုံက ရေပန်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်ကို တပ်သားတွေအားလုံးအရင်တက်စေခဲ့ပြီးမှ ဗိုလ်မှူးချုပ်က နောက်ဆုံးကျန်ရစ်ခဲ့သူအဖြစ်နဲ့ အပြီးသတ်ထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနက တွစ်တာပေါ်မှာ “အာဖဂန်ကထွက်ခွာခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးသော အမေရိကန်စစ်သား” လို့ ရေးသားကာ ဒီဓာတ်ပုံကို ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဟာ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထားပြီး အာဖဂန်ကနေ တပ်ဖွဲ့တွေကို အပြီးသတ်ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ တာလီဘန်တို့နဲ့ သဘောတူညီစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ တာလီဘန်တွေက အာဖဂန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နဲ့ နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဟာ ကဘူးလ်က သူတို့ရဲ့ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ မဟာမိတ်အရပ်သားတွေကို ကယ်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ရပြီး ၂ ပတ်အကြာမှာ အားလုံးကိုအပြီးသတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အာဖဂန္က ထြက္ခြာခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆုံးအေမရိကန္စစ္သားက ဘယ္သူလဲ?
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့ အာဖဂန္စစ္ပြဲကေတာ့ အေမရိကန္တပ္ေတြ ဒီေန႔မွာ အၿပီးသတ္ထြက္ခြာမႈနဲ႔အတူ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနတဲ့ အေမရိကန္တပ္သားေတြဟာ တနလၤာေန႔ညက ကဘူးလ္ေလဆိပ္ကေန အၿပီးသတ္ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ဆုံးရႈံးမႈေတြနဲ႔အတူ သူတို႔ရဲ့ အာဖဂန္ဇာတ္လမ္းကို တခန္းရပ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း အာဖဂန္ကထြက္ခြာခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆုံးေသာအေမရိကန္သားအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ေစမယ့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ Chris Donahue ရဲ့ ဓာတ္ပုံကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၈၂ ေလတပ္ဌာနခြဲရဲ့ တပ္မႉး Chris Donahue ဟာ အာဖဂန္ေျမကေန ေနာက္ဆုံးထြက္ခြာတဲ့ အေမရိကန္စစ္သားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ့ ဒီဓာတ္ပုံကေတာ့ သမိုင္းဝင္ေနေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။…
ညၾကည့္မွန္ေျပာင္းကို အသုံးျပဳၿပီး ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓာတ္ပုံျဖစ္ကာ ကမၻာ့မီဒီယာေတြထက္မွာေတာ့ ဒီဓာတ္ပုံက ေရပန္းစားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚကို တပ္သားေတြအားလုံးအရင္တက္ေစခဲ့ၿပီးမွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္က ေနာက္ဆုံးက်န္ရစ္ခဲ့သူအျဖစ္နဲ႔ အၿပီးသတ္ထြက္ခြာလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက တြစ္တာေပၚမွာ “အာဖဂန္ကထြက္ခြာခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆုံးေသာ အေမရိကန္စစ္သား” လို႔ ေရးသားကာ ဒီဓာတ္ပုံကို ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ဟာ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ကို ေနာက္ဆုံးထားၿပီး အာဖဂန္ကေန တပ္ဖြဲ႕ေတြကို အၿပီးသတ္႐ုတ္သိမ္းေပးဖို႔ တာလီဘန္တို႔နဲ႔ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ တာလီဘန္ေတြက အာဖဂန္ကိုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ နိုင္ငံတကာအစိုးရေတြဟာ ကဘူးလ္က သူတို႔ရဲ့ သံ႐ုံးဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ မဟာမိတ္အရပ္သားေတြကို ကယ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရၿပီး ၂ ပတ္အၾကာမွာ အားလုံးကိုအၿပီးသတ္ခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Previous Article သာကောအစိုးရကြောင့် တပတ်ကို ၃ နာရီပဲ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခွင့်ရှိတော့မယ့် တရုတ်လူငယ်များ
Next Article သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ချန်ထားရစ်ခဲ့ပြီး နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ နီကိုးလ်ဂျီး